फेरि अर्को दु’खत खबर ! बैतडीमा ५ वर्षीय बालकसहित दुई जना मृ’x त अबस्थामा फे’x ला – Dainik Sangalo
फेरि अर्को दु’खत खबर ! बैतडीमा ५ वर्षीय बालकसहित दुई जना मृ’x त अबस्थामा फे’x ला
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ०६, २०७८ समय: ९:२०:०४
पाँच वर्षीय बालकसहित आज बैतडीमा दुई जना मृ,x त फेला परेका छन् । सुर्नया गाउँपालिका– ५ कक्स्याली ४७ वर्षीय ध्वजबहादुर विष्ट असोज २९ गते घोडधौनीस्थित दाजुको घरबाट आफ्नो घर जान्छु भन्दै हिँडेकामा आज बिहान १० बजे कक्स्यालीमा मृ,x त फे,x ला परेका हुन् ।
उनको मृ’x त्यु’को कारण खुल्न नसके र घट’नाबारे थप अ’नुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता दर्शन खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच डिलाशैनी–४ मठैराजका पाँच वर्षीय सुभम विष्ट पनि मृ’x त फे’ला परेका छन् । सुभमको श’x व दोगडाकेदार–६ चम्तडी नजिक चौलानी नदी किनार’मा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कात्तिक २ गते सुभमकी आमा २८ वर्षीया जयन्ती विष्टले सुभमसहित जमाडी नदी’मा हा,x म,x फा’x ले,की थि’इन् । जयन्तीको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ । जयन्तीका श्रीमान् घरमै छन् । घ’टना’बारे अनुसन्धान अगाडि बढाइएको ताइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् , नेपाली युवा दिनेश न्यौपानेले बनाएको किबोर्ड एप ‘फन्ट्स् एए किबोर्ड’ झण्डै एक करोड रूपैयाँमा बिक्री भएको छ । उनले १२ महिना लगाएर यो एप तयार पारेको जनाएका छन् । विहिवार सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसवारे जानकारी दिँदै उनले आफ्नो मेहनत सफल भएको बताएका छन् ।
Last Updated on: October 23rd, 2021 at 9:20 am